अशोकसँग किन डराए दीपकराज गिरी ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
(Tuesday, 23 July, 2019)
अशोकसँग किन डराए दीपकराज गिरी ?
भदौ १९, २०७५
काठमाडौं – तपाईँको चलचित्रको रिलिज डेट कहिले ? प्रायः निर्मातालाई यो प्रश्न राख्ने हो भने तुरुन्तै जवाफ पाउन सकिन्छ । फलानो दिन । तर अभिनेता दिपकराज गिरीले भने आफ्नो चलचित्रको रिलिज दिन तोक्न सकेका छैनन् ।
प्रसंग हो –केही दिन पहिले रिपोटर्स क्लब नेपालले गाईजात्राको अवसर पारेर आयोजना गरेको गाइजात्रे अन्तक्रिया कार्यक्रमको । जहाँ निर्माता समेत रहेका कलाकार दीपक राज गिरीले आफूले निर्माण गरेको पछिल्लो चलचित्र ‘छक्का पन्जा ३’को रिलिज मिति यो दिन भनेर भन्न सकेनन् ।
गाइजात्रे मन्तब्यका लागि कार्यक्रममा सहभागी दिपकले बोल्ने क्रममा केही ब्याङ्य प्रस्तुत गरेर दर्शक हसाउन सफल समेत भए । सोही क्रममा उनी माथि प्रश्न राखिएको थियो । तपाईँको चलचित्र ‘छक्का पन्जा ३’ कहिले लाग्छ । जवाफमा उनले भने दशैमा ।
दिपक जी भन्दिनुस् कुन दिन ? क्लबका अध्यक्ष धमलाले फेरि प्रश्न गरे । दीपकको जवाफ एउटै थियो –दशैमा लाग्छ ।
यस अगाडि ‘छक्का पन्जा’को दुई सिक्वेल सहित केही चलचित्र बनाएका दिपकले आफ्ना सबै चलचित्रको रिलिज दिन एक बर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आएका थिए । तर यो चलचित्रको रिलिज दिन भने उनले भन्न सकेन् ।
आखिर किन भन्न सक्दैन दिपक आफ्नो चलचित्रको प्रदर्शन मिति ? कार्यक्रममा सबैको चासोको बिषय थियो । मेरो छेउमै रहेका एक पत्रकार भने यो बिषयमा पूरै जानकार देखिए । दीपकले आफ्नो चलचित्रको रिलिज मिति भन्न नसक्नुको कारण निर्माता निर्देशक अशोक शर्मा रहेको उनले सुनाए ।
उनका अनुसार दीपक आफ्नो चलचित्र फुलपातीको दिन रिलिज गर्न चाहन्छन् । यहि दिन निर्माता निर्देशक अशोक शर्माले लामो समयपछि बनाएको चलचित्र ‘जय भोले’ लाग्दैछ ।
‘जय भोले’ रिलिज भयो भने प्रमुख हल उसले नै कब्जा गर्नेछ । दीपकको भागमा थोरै हल पर्नेछ । हल थोरै पाउने भएपछि चलचित्र रिलिज गर्ने नगर्ने दीपक अन्योलमा रहेका छन् । यस कारण पनि दीपकले आफ्नो चलचित्रको रिलिज डेट भन्न नसकेका हुन् ।
प्रकाश न्यौपानेले ल्याए ‘तिम्रो नजिक’
मध्यरातमा छविराज ओझाले किन लेखे शिल्पालाई यस्तो पत्र ?
नाजायज बच्चाका बाबु हुन् आमिर
चैत २, २०७४
सलमानसँग नृत्य गर्न नेपाली नायिकाले गरे अस्विकार
सलमानले यी युवती भेटेपछि हल्लीखल्ली !
माघ २४, २०७४
यी पाँच व्यक्तिलाई कहिल्यै साथी नबनाउनु होस् , दुख पाईएला !
साउन ५, २०७६
छिटै बुढो भईएला ! यी ६ काम भुलेर पनि नगर्नुस्
आरजुका कारण केसीमाथि आइलाग्यो आपत, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा को को पर्दैछन् ?
थाहा पाउनुहोस् , कुन सपनाको फल कस्तो हुन्छ ?
दूध कसरी चिन्नेः नक्कली हो वा सक्कली ? यस्तो छ सजिलो उपाय
फड्को मार्दै कृषि विकास बैंक
विप्लव दुई कार्यकर्ता पक्राउ
१० नेपाली विधार्थी थाईल्याण्डबाट उद्दार
‘नेपाल स्टक’ : अब पोर्टफोलियो ट्र्याकिङ सित्तैमा !